Toriteny 29 Desambra 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny 29 Desambra 2013
Isaia 40:9–11 / Lioka 2:36–38 / Titosy 1:1–4
Alahady natokana ho an’ny Sefala Foibe ny andro anio sady famaranana rahateo ny faha 100 taona Dorkasy Amboniloha. Ny Isaia 40 : 9 -11 no hafatra ampitain’ny Tompo an’ny Krsitiana anio. Koa manasa antsika mba ho liana amin’ny fandraisana izany hafatra izany.
1- Fiangonana mijoro amin’ny teny sy amin’ny asa mba hizara tsara ny vaovao mahafaly.
And : 9 dia misy antso miantefa amin’i tendrombohitr’i Ziona fanaovana fanompoana Masina sy ny tananan’ny Jerosalema fonenan’Andriamanitra.
Fa nahoana moa no tendrombohitra sy tanàna no iantefan’ny antsoantson’ny Mpaminany ?
Nisy ny fotoana izay naharava an’i Jerosalema , izay midika ho fahapotehin’ny fiainam-panahy, izany hoe mifanalavitra amin’Andriamanitra ny olony vokatry ny fahotana. Ziona sy Jerosalema mitoloko no hita teo aloha, feno ranomaso sy fitarainana. Fa anio kosa Andriamanitra dia maniraka ny Mpaminany hanandratra ny feony hiantso mafy manao hoe : “Mijoroa , misandrata, ento ny Teny soa mahafaly “ Isika vahoaka Kristiana no antsoina amin’izany. Alahady farany amin’ny taona anio, betsaka ny faharavana sy fahapotehana nandritra taona 2013, mitoloko sy mitanondrika isika, fa miantso antsika kosa Andriamanitra amin’ny alalan’izao Toriteny izao mba ho vonona tsara hitsena ny taona vavao. Tsy hoe tsy nahajoro isika, fa fotoana indrindra hampakarana ny herim-panahin’ny Krsitiana izao, hijoroan’ny olom-boantso rehetra mba hanao tsara ny asan’Andriamanitra, haneho sy hanandratra avo ny voninahitr’Andriamanitra, mba tsy Kristiana resy lava, fa isika no tanàna miorina eny an-tampon-tendrombohitra, modely tazanin’ny fiaraha-monina sy ny manodidina itarafany hoe tena mahay ny zavatra rehetra tokoa io Andriamanitra io.
2- Ny olom-boantso dia manana tanjona eo amin’ny fianam-panompoany
Lioka 20, mitantara ny fianan’i Ana, vehivavy nanoka-tena ho amin’ny fanompoana an’Andriamanitra sy ny fifadian-kanina. Titosy kosa mitono-tena ho olom-boafidin’Andriamanitra ka ny anton’asany dia ny hanambara ny Filazantsara. Apostolin’I Kristy aho hoy indrindra izy; hitaona ny olona hanana toe-panahy araka an’Andriamanitra.
Ary izaho sy ianao kosa mba ahoana ?
Inona no andaniantsika ny androntsika, fantaro ry havana fa misy asa anirahan’ny Tompo antsika mandritra ny androm-pahavelomana, aza mitazam-potsiny, tsy manery anefa Izy. Mampianatra antsika izao Tenin’Andriamanitra izao : “aoka mba ho ny fifandraisana amin’Andriamanitra sy ny fianarana ao Aminy no andaniana ny androm-pahavelomana”, mba ho jiro sy tanàna miorina ao an-tampon-tendrombohitra. Ianao no Ziona sy Jerosalema izay hanorenan’ny Tompo ny teny fikasany, hitondra fiainana sy fahazavana.
Ry Kristiana vita batisa, Mpandray Fanasan’ny Tompo , Diakona… Alahadin’ny Antso anio , miantso anao Jesoa mba hanaiky ho fantsona voafidy ikorianan’ny fahasoavana sy fitahiana ho an’ny rehetra.
RANDRIANARISOA Hajaniaina Célestin, Mpitandrina.
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 9 janvier 2014